Muuri News Network » XOG: Hoteellada magaalada Muqdisho qaarkood oo lagu arkay arrin yaab iyo amakaag dhalisay.!!
XOG: Hoteellada magaalada Muqdisho qaarkood oo lagu arkay arrin yaab iyo amakaag dhalisay.!!
Nov 5, 2015 - Comments off
Iyadoo ay Maleeshiyaadka Al-shabaab dagaalkii ay kula jireen DF Somalia u rogay dhanka Hoteelada ayaa waxaa iminka ay bilaaben Milkiilayaasha Hoteelada tallaabo aan horay looga baran.
Milkiilayaasha Hoteelada oo ka feejignaanaya weeraro kaga imaada dhanka Maleeshiyaadka xagjirka ah ee Al-shabaab ayaa ku dhiiraday in Mas’uuliyiinta iyo ganacsatada degan Hoteelada ee aan heysan hubka ay u qeybiyaan Bastoolado si ay isku difaacan haddii ay dhacdo in weerar lagu qaado.
Hubka loo qeybinaayo shaqsiyaadka deegaanka ku ah Hoteelada qaar ayaa xiliga bixitaankooda laga reebaa waana hub u gaar ah Hoteelka islamarkaana ay mamnuuc tahay in banaanka sare lala aado.
Milkiilayaasha Hoteelada iyo Maamulayaasha ka hooseya oo xiliyadii hore diidi jiray in Hubka ay Mas’uuliyiinta la galaan qololka Hoteelka ayaa iminka fasaxay inay la gali karaan qololkooda si shaqsi waliba uu naftiisa u ilaaliyo ka hor inta uusan ku tashan ilaalada Hoteelka.
Arrintaani ayaa dhalinkarta in dhibaatooyin farabadan ay kala kulmaan Mas’uuliyiinta bacdamaa ay Al-shabaabkuba awoodan inay iyaga isku muuqaal ekeysiiyan sidaana ay Hubka ula galaan gudaha Hoteelka kadibna halkaasi ay ka dhalato fal lidi ku ah amaanka.